Facebook အကောင့်လုံခြုံမှုကို စစ်ဆေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းမှားတစ်ခု မှားယွင်းပျံ့နှံ့ | သတင်းအချက်အလက်စိစစ်မှု
(FILES) In this file photo taken on October 28, 2021 this illustration photo taken in Los Angeles showsaperson using Facebook onasmartphone in front ofacomputer screen showing the META logo. Shares of Facebook parent Meta plunged 24 percent in opening trading February 3, 2022, weighing on the Nasdaq and threatening the stock market's four-day winning streak. ( AFP / Chris DELMAS)
Facebook အကောင့်လုံခြုံမှုကို စစ်ဆေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းမှားတစ်ခု မှားယွင်းပျံ့နှံ့
AFP ထိုင်း ပုံနှိပ်ဖော်ပြသည့်နေ့စွဲ ကြာသပတေး 24 ဖေဖော်ဝါရီ 2022 အချိန် 10:13
Facebook ပေါ်မှာ “Gg” လို့မှတ်ချက်ပေးပြီး အဲဒီစာလုံးပန်းရောင်ပြောင်းသွားရင် မိမိရဲ့ Facebook အကောင့်လုံခြုံတယ်ဆိုတဲ့ ပိုစ့်ကို မြန်မာ့ Facebook အသုံးပြုသူတွေအကြား အကြိမ်ရေရာနဲ့ချီမျှဝေနေကြပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းယူပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook သုံးစွဲမှုကို စစ်တပ်ကပိတ်ပင်ခဲ့ပေမဲ့ လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူတွေဟာ VPN နဲ့ ဆက်လက်အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ Facebook ရဲ့ မိခင်ကုမ္မဏီဖြစ်တဲ့ Meta ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ဒီအဆိုဟာ မှားယွင်းပါတယ်လို့ AFP ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ပါမောက္ခတစ်ဦးက ဒီအဆိုဟာ “အခြေအမြစ်လုံးဝမရှိတဲ့အဆို” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီအဆိုကို Facebook ဒီလင့်ခ်မှာ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ နေ့က မျှဝေထားပြီး ပြန်လည်မျှဝေမှု အကြိမ်ရေ ၁၀၀ ကျော်ရှိနေပါတယ်။
အခုတလောမှာ facebookဟာ VPN တွေကြောင့်
Gg က ပန်းရောင်ပြောင်းသွားရင် အကောင့်လုံခြုံပါတယ်။” (မူရင်းသတ်ပုံအတိုင်း) ဆိုပြီး ဒီပိုစ့်မှာ ဆိုထားပါတယ်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့က ရယူထားတဲ့ နားလည်မှုလွဲစေတဲ့ပိုစ့်ရဲ့ Screenshot
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရပ်သားအစိုးရကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာ စစ်တပ်က အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုတင်းကြပ်ခဲ့ပြီး Facebook အပါအဝင် လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုမှုတွေကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီတားမြစ်မှုတွေကြားကနေ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေကို VPN အသုံးပြုပြီးသုံးစွဲနေတဲ့ သတင်းကို AFP က ဒီလင့်ခ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
တူညီတဲ့ပြောဆိုမှုနဲ့ ဒီအဆိုကို ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်နဲ့ ဒီလင့်ခ်တွေမှာ မျှဝေထားပြီး ဒီပိုစ့်အောက်မှာ “Gg” ဆိုတဲ့စာလုံးကို လူအတော်များများ မှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။
Facebook ရဲ့ မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Meta ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက “တချို့စကားလုံးတွေက Facebook ပေါ်မှာ ရေးသားလိုက်ရင် News Feed ပေါ်မှာ ရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲတာ ဒါမှမဟုတ် အရောင်ပြောင်းတာမျိုးဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားပါတယ်။” ဆိုပြီး AFP ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ဒီလို စကားလုံးတစ်ခုခုကို ရေးသားလိုက်တာနဲ့ သင့်ရဲ့အကောင့်ကို လုံခြုံမှုမပေးနိုင်ပါဘူး။”
“Facebook ထုတ်ကုန်တိုင်းမှာ အကောင့်ဝင်ရင် အချက်ပေးတဲ့စနစ်တွေ (login alerts)၊ နှစ်ဆင့်ခံလုံခြုံရေးစနစ် (two-factor authentication) တွေစတဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်တွေကို သင့်အကောင့်ပိုမိုလုံခြုံစေဖို့အတွက် ထည့်သွင်းထားပါတယ်။”
Ulster တက္ကသိုလ်က ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးပါမောက္ခ Kevin Curran က ဒီအဆိုဟာ “လုံးဝအခြေအမြစ်မရှိ”တဲ့ပြောကြားချက်သာဖြစ်တယ်လို့ AFP ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ဒီ “Gg” ဆိုတဲ့စကားလုံးက ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကတည်းက Facebook ပေါ်မှာရှိတဲ့ “text delights” လိုခေါ်တဲ့ ဖန်တီးမှုတွေထဲက လက်သီးဆုပ်ရုပ်ပုံဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်” လို့သူကရှင်းပြပါတယ်။
“ဒီဖန်တီးမှုက Facebook ရဲ့လျှို့ဝှက်အပျော်ဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူထုကိုဖော်ပြတာတွေမရှိခဲ့ပါဘူး။”
“ဒီဖန်တီးမှုတွေက ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ Facebook လုံခြုံရေးနဲ့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။”
ဒီပိုစ့်နဲ့ဆင်တူတဲ့ “Gratula” ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ အဆိုတစ်ခုကိုလည်း AFP က အချက်အလက်စိစစ်မှုကို ဒီလင့်ခ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
AFP ဟာ Facebook ရဲ့အချက်အလက်စိစစ်မှုပရိုဂရမ်နဲ့အတူ အချက်အလက်စိစစ်မှုတွေကို ဘာသာစကားပေါင်း ၂၄ ခုနဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကျော်မှာ Facebook နဲ့ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ စတင်ခဲ့တဲ့ ဒီပရိုဂရမ်အရ WhatsApp နဲ့ Instagram အပါအဝင် လူမှုကွန်ယက်ပလက်ဖောင်းပေါ်က သတင်းအချက်အလက် စိစစ်ရေးအတွက် အထူးအချက်အလက်စစ်ဆေးသူတွေနဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း ၈၀ခန့်ကို Facebook ကခန့်အပ်ထားပါတယ်။